Azo alaina hividianana ny fampiharana Adobe Fresco vaovao miaraka amin'i Sensei | Famoronana an-tserasera
Azonao atao izao ny misintona ny Adobe Fresco amin'ny iPad anao, azo alaina manomboka anio
Tonga ihany i Adobe Fresco, ny fampiharana Adobe vaovao ho an'ny iPad Ary izany dia miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy hiteraka traikefa mitovy amintsika rehefa mampiasa borosy misy loko rano na fitaovana hafa isika.
Hoso-doko Izy io dia miavaka amin'ny fanolorana borosy vector, mazava tsara, madio ary azo ovaina, Photoshop ary azo ovaina. Fa ny tena mahasarika ny saintsika dia ny Live Brushes ary tonga mivantana amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy izy ireo.
Es Adobe Sensei Teknolojia faharanitan-tsaina artifisialy Adobe ny tompon'andraikitra amin'ny famerenana ny traikefa amin'ny sary hosodoko misy loko na menaka. Ny zava-drehetra avy amin'ny iPad anao ary tianao hanano sarotra kokoa ny hamorona zavatra, ny fampiharana quintessential ho an'ny sary amin'ny App Store.
Adobe Fresco dia misy amin'ny App Store ho an'ireo manana famandrihana Creative Cloud. Misy standalone ihany koa na ho toy ny kinova andrana maimaimpoana. Tena tsara ho an'ny Adobe amin'ny fanomezana fomba samihafa hidirana amin'ilay toa fampiharana tsara ho an'ny iPad.
Lazainay izany satria misy Procreate azo alaina tokana avy amin'ny € 10,99 sy ny fampiharana indrindra ny "mikapoka" avy amin'i Adobe. Avy amin'ny bilaogy izay nanambaran'izy ireo ny fahatongavan'i Fresco, Adobe dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ny fanoharana azo alaina amin'ny fampiharana ity.
Izay antenaintsika dia ny mahafantatra hoe rahoviana no ho tonga amin'ny Android izy io Ary noho izany tsy ny mpampiasa iPad ihany no afaka mankafy ity fampiharana vaovao ity. Amin'izao fotoana izao dia mahazo famerenana tsara, na dia betsaka aza ny asa tokony hatao mba tena hiteraka io traikefa amin'ny sary hosodoko io miaraka amin'ny borosy amin'ny lamba malaso.
Ianao dia afaka midira amin'ny fahazoana ny Adobe Fresco avy amin'ity rohy ity; aza adino ny fotoana mijanona amin'ny Capture, fampiharana izay ahafahanao manangona ireo gradients avy amin'ny fakantsarinao finday ary avy eo mamindra azy ireo amin'ny PC na Mac anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Azonao atao izao ny misintona ny Adobe Fresco amin'ny iPad anao, azo alaina manomboka anio
izm1r dia hoy izy:
Manantena ny fahatongavanao amin'ny android aho ???
Mamaly an'i Izm1r
Sintomy ny Trello ary milamina
Paramount Animation dia efa manana mascot sy sary famantarana azy manokana